Fitantanana ny firenena: dodona ho filoha Rakotovao Rivo, saingy kely ny fahefany | NewsMada
Fitantanana ny firenena: dodona ho filoha Rakotovao Rivo, saingy kely ny fahefany
Tsy filoham-pirenena fa ho filoham-panjakana. Voafetra ihany ny fahefan’ny mpisolo toerana vonjimaika, Rakotovao Rivo aorian’ny fametraham-pialan’ny filoha Rajaonarimampianina. Efa dodona tanteraka ity filohan’ny Antenimierandoholona ity ho amin’izany seza izany ka tsy miray hevitra amin’ireo tandapa sasany sy ny olon’ny fitondrana mirona amin’ny hevitry ny amiraly Ratsiraka ho any amin’ny fitondrana Tetezamita sy ny hanemorana ny fifidianana. “Tsy ao anatin’izany hevitra ho amin’ny Tetezamita raha ny tenanay”, hoy izy. Efa maika ho amin’ny laza amam-boninahitra ho filoha…tsy voafidim-bahoaka fa tongatonga ho azy izany ny tenany.
Hisitraka ireo tombontsoa samihafa…
Tsy mitovy amin’ny fahefan’ny filoham-pirenena ny fahefan’ny filoham-panjakana, araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana. Anisan’izany ny tsy fahazoany miditra amin’ny fifanarahana vaovao, indrindra fa eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Mijanona ho amin’ny fampandehanana sy ny fitantanana raharaham-panjakana andavanandro amin’ny ankapobeny ihany izany ny andraikitra hosahaniny.
Na izany aza anefa, hisoratra eo amin’ny tantara izany Rakotovao Rivo izany, tahaka ireo filoham-panjakana nitantana ny firenena rehetra teto amintsika. Ohatra, Ratsirahonana Norbert Lala na Rajoelina Andry, efa samy filoham-panjakana avokoa. Hisitraka ireo zo sy ny satan’ny filoha rehetra teo aloha, miaraka amin’ny tombontsoa samihafa. Karama sy ny tambiny, ny hofan-trano, ny mpiambina maromaro, ny mpitan-tsoratra, ny fiara…
Notakin’ny depiote 73 teny amin’ny kianjan’ny 13 mey
Tsiahivina fa anisan’ireo notakin’ireo depiote 73 sy ny vahoaka teny amin’ny kianjan’ny 13 mey, ny volana jona sy mey teo ny hialan-dRakotovao Rivo, niaraka tamin’ny filoha Rajaonarimampianina. Anisan’ny anton’izany ny tsy naha ara-dalàna ny nahatongavany eo amin’io sezan’ny filohan’ny Antenimierandoholona io.